Degmooyin aad u yar oo aqbala in kali socodku ku nagaado markey 18 jir gaaraan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caruurta keligood yimaada. sawir: Fredrik Sandberg/TT
Degmooyin aad u yar oo aqbala in kali socodku ku nagaado markey 18 jir gaaraan
La daabacay tisdag 8 augusti 2017 kl 10.13
Dhallanka kali socodka ku yimid dalka ayaa marka 18 sanno u buuxsanto ku qasbanaada kala doorasho ah in laga raro halka ay degan yahiin ama hooy la'aan noqdaan.
Iyadoo dawladda Sweden ay degmooyinka dalkaan u balan qaadey in ay lacago dheeraad ah siin doonto haddii ay degmooyinkaasi u ogolaadaan dhallaanka kali socodka ahi in ay degmooyinkaas sii daganaadaan ka dib marka ay buuxiyaan da’da 18 sanno, ayaa hadana qaar yar oo degmooyinkaas ka mid aqbalaan soo jeedintaas ay dawladda.
Qaar badan oo dhallaankaas kali socodka ah ayaa waxaa la soo gudboonaatey in la dajiyo meelo iskuulada ay dhigtaan iyo asxaabtoodaba ka fog amaba ay hoy la’aanba noqdaan.
Bishaan Agoosto 1-deedii ayaa waxaa lagu qiyaasey in dhallaanka kali socodka ah ee 18 jirka buuxinayaa ay dalkaan dhammaayeen qiyaastii 4 700 oo qof .
Reza (waa wiil magac kale leh) oo 18 sanno buuxiyey muddo afar bilood ka hor, markii uu qaan gaaray guri iyo hoy la'aan, wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
- Waxaan ku noolahay ama seexdaa xarumaha tareenada iyo basasku ka baxaan, keymaha dhexdooda, wadooyinka hoostooda iyo beeraha dadwynaha loogu talagaley.
Reza ayaa laba sano ka hor ka yimid dalka Afqaanistaan , wuxuuna muddadaas daganaa degmada Malmö isagoo wali jawaab ka sugaya codsigiisii magangalyo doonimo ee uu dalkaan Sweden ka codsadey.
Dhallaanka kali socodka ah ayaa marka ay 18 sano buuxiyaan waxay mas’uuliyaddoodu ka wareegtaa degmooyinka ay degan yihiin taas oo isla markaas u wareegta hey’adda socdaalka dalkaan Sweden oo ay tahay in ay maareyso daruufahooda nolaleed.
Hey’adda socdaalka ayaa Reza waxay degaan uga heshey degmada Jönköping, balse wuu iska ddiiday:
- Magaaladaas waxba kuma heysto, saaxiibo kuma lihi , iskuul aan dhigto kuma heysto, iskuulkuna aad iyo aad buu muhiim iigu yahay , ayuu yiri Reza.
Dawladda dalkaan iyo xisbiga Vänster-ka ayaa aaminsan in ay dhibaato tahay in degmooyinka dalkaani dhallaankaas khasab uga raraan goobaha ay degan yihiin sidaas daraadeed ayey bishii juun ee la soo dhaafey waxay labadaas xisbi isla garteen in degmooyinka dalkaan la siiyo lacag dhan 195 milyan oo karoon si ay dhallaankaas kali socodka ah ee 18 jirka buuxiyey u sii daganaadaan degmooyinkii ay horey u deganaayeen, laakiin sidaas oo ay tahay degmooyin yar oo dalkaan ka mid ah ayaa arrinkaas fuliyey.
Hans Karlsson oo madax waaxeed ka ah hey’adda degmooyinka iyo rugaha caafimaadka dalkaan Sweden ayaa isagoo arrinkaan ka hadlaya waxa uu yiri:
- Waxaa jira dhibaatooyin degmooyinka dhankaas ka heysta, tusaale ahaan lacagtaas oo ah mid aad u yar oo aan ku filneyneyn in lagu daboolo dhammaan baahiyaha ay dhallaankaasi qabaan, ayuu yiri Hans Karlsson.
Laakiin dhanka kale waxaa jira degmooyin fara ku tiris ah oo iyagu isla markiiba fulinta arrinkaas ku dhaqaaqey, waxaana tusaale ahaan ka mid ah degmada Uppsala oo iyadu dhallaankii keli socodka ahaa ee degmadaas deganaa u ogolaatey in ay degmadaas ku sii nagaadaan ka dib markii ay buuxsheen da’da dalkaan Sweden lagu qaangaaro ee 18 jirka.